Uxolo Disqus, Ndingumlandeli ngoku! | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 16, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngayo yonke le micimbi ngoku isonjululwe, kunye nokusebenza kwe-Disqus okukhulayo kunye nokudityaniswa kwiMithombo yeendaba yeNtlalontle, kuyenza ingqiqo enkulu kwiibhlog zeWordPress ukufaka iplagi nokudibanisa inkonzo. Khange ndizame i-IntenseDebate, kwaye andikaboni zindaba zininzi okanye ukwamkelwa malunga nayo… nabani na oyisebenzisayo?
Abantu abanobubele eDesqus bade bandivumela ukuba ndikhuphe umxholo webhlog yam kunye nezimvo ngeXML kwaye ndiyilayishe kwiqela labo lenkxaso. Ngoku bahambisa onke amagqabaza amadala asuka kwibhlog yam besiya kwiinjini zabo. Kuhle kakhulu!
Ke… kubasebenzi baseDisqus, ndinetyala kuwe ngokucela isicelo sakho ukuba singaphumeleli. Nangona yayiyinto elungileyo ukuyenza ngelo xesha, ndingumlandeli ngoku! Unemveliso emnandi kwaye ndiyayithanda indibaniselwano kaTwitter!
tags: inkqubo yokubeka izimvoinkqubo yokubeka izimvoDisqus
Juni 16, 2009 ngo-10: 06 PM
Ngokwenyani bendineengxaki nge-Disqus, kodwa ithiyori yiplagi elungileyo. Ndiyithandile indlela abathumela ngayo i-imeyile kum xa umntu ephawula, kodwa iyonke le nkqubo khange nje isebenze kum. Ucinga ntoni malunga nenkqubo ethathe indawo yeZezWho?
Juni 16, 2009 ngo-6: 15 PM
Ndonwabile ukuba ndinokukunceda =) Zive ukhululekile ukundibamba ukuba ufuna enye into.
Oktobha 10, 2009 ngo-10: 46 PM
Ndandikweso sikhephe sinye, ndasuka kwiWordPress kuphela ndaya kwiDisqus kodwa ndinemicimbi efanayo emva koko ndaya kwi-IntenseDebate kwaye ngoku ndizama iDisqus kwakhona kuba i-ID yayizizo zonke iintlobo zebuggy.
I-Disqus yam ibonakala inengxaki efanayo kuye wonke umntu onayo nge-WordPress 2.8.4, ayizukungenisa izimvo.
Ngaba kuya kufuneka ndiyicime kwaye ndifumane enye into…. kwakhona?
Ndimele ndivume - i-floppy strips-of-paper hair kwi-DoAX2 yayiyinkunkuma nje.
Okt 14, 2011 ngexesha 1:11 AM
Iposi entle kakhulu enedisqus
Oktobha 30, 2011 ngo-8: 09 PM
Oktobha 30, 2011 ngo-8: 59 PM
Ndicinga ukuba i-spammers ithathe ishishini elibi kakhulu kangangokuba kufuneka sibe nemilinganiselo endaweni efana nokungena; Nangona kunjalo, kwiindawo zeshishini-iyavakala kwaye yindlela entle yokuqokelela ulwazi malunga nethemba.
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2013 ngo-9: 29 AM
Uthetha ukuthini ngo "spam"?
Jan 1, 2012 kwi-9: 44 AM
Ndiyayithanda i-Disqus, ilula kakhulu ukuyifaka kwaye kulula ukuyisebenzisa. Vumelana noDouglas malunga nokuba kuyimfuneko ukuba ungene, ubuncinci zininzi iindlela zokungena kwi-google, yahoo, facebook, twitter njl.
Ndiyayithanda nje. Iluncedo kakhulu Kulula ukuyisebenzisa.
Mar 26, 2012 ngo-11: 44 AM
Enkosi ngokuthatha ixesha lokuxoxa ngale nto, ndiziva ndomelele
malunga nayo kwaye ndiyakuthanda ukufunda ngakumbi kwesi sihloko. Ukuba kunokwenzeka, njengoko uzuza
ubungcali, ngaba ungakhathazeka ngokuhlaziya ibhlog yakho ngolwazi oluthe kratya? Yi
iluncedo kakhulu kum.
Epreli 18, 2012 ngo-6: 58 AM
Ndiyayithanda indlela Disqus yentlalo ngayo! Kulula kakhulu ukusebenzisa eluntwini kunayo nayiphi na enye inkqubo "yokucoceka" endinokucinga ngayo.
Novemba 16, 2012 ngo-1: 14 PM
Mar 5, 2014 ngo-9: 05 AM
Andiqinisekanga ukuba lelona jonga liphezulu, kodwa iDisqus ikhule ngokukhawuleza kunyaka ophelileyo okanye emibini.
Mar 5, 2014 ngo-9: 13 AM
Izamile ukusebenzisa iplagi, kodwa ibambe njengangoku. Zininzi iiplagi esele zikhona, kubandakanya enye yezimvo ze-FB.